Ivontoerana Safidy : “Mbola mandringa ny lalàm-pifidianana” | NewsMada
Ivontoerana Safidy : “Mbola mandringa ny lalàm-pifidianana”
“Anisan’ny asa lehibe ataonay amin’izao, rehefa vita ny fifidianana kaominaly: manao volavolana lalàm-pifidianana. Tanjona ny mba hananan’ny olona fitokisana bebe kokoa ny fifidianana eto Madagasikara, ary mba hahazoana olona tena voafidy tokoa sy manana ny tena tanjaka mitondra any amin’ny fampandrosoana sy ny ady amin’ny fahantrana.”
Io ny nambaran’ny mpandrindra ny tetikasa Fifidianana andraisan’ny olom-pirenena andraikitra (Fanoa), eo anivon’ny Sampana fanaraha-maso ny fifidianana, ivon’ny demokrasia ifarimbonana (Safidy), i Ndriandahy Mahamoudou, teny Ambatonakanga, afakomaly, momba ny tetikasa Fanoa, novatsian’ny Vondrona eoropeanina vola, izay nifarana ny volana jona lasa teo. Fanentanana ny olom-pirenena handray andraikitra amin’ny fifidianana ny tetikasa Fanoa.
Misy ny ezaka mbola tokony hatao hahazoana manatsara ny zotram-pifidianana. Anisan’ny ngezabe amin’izany, ohatra, ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana, araka ny fanazavany. Iarahan’ny rehetra mahalala fa mandringa sy tsy mametraka tsara ny fampitoviana lenta ny kandidà amin’ny fifidianana. Tsy maintsy hotohizana izay, na vita aza ny fifidianana kaominaly.
Asa mitohy izay hitsinjovana ny fifidianana manaraka. Tahaka izay ihany koa ny amin’ny fanatsarana ny lisi-pifidianana, izay iarahantsika mahafantatra fa anisan’ny lesoka goavana mba tsy hilazana hoe lesoka fototra amin’ny zotram-pifidianana.
Nahomby ny tetikasa Fanoa
“Amin’ny ankapobeny, nahomby ny tetikasa satria tratra ny tanjona”, hoy izy momba ny tetikasa Fanoa. Be dia be ny tanjona nihoatra noho ny neritreretina tamin’ny voalohany. Ohatra, adihevitra 60 no hotanterahina, nahatratra 80 mahery izany. Neritreretina hoe fikambanana 100 no niaraha-niasa amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana, tafakatra 700 mahery izany tamin’ireo faritra fito niasan’ny Fanoa.